पुजा शर्मा विवादमा बोल्दै दिपकराज लेख्छन, ‘डरले मुटु झस्किरहन्छ आजकल… – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/पुजा शर्मा विवादमा बोल्दै दिपकराज लेख्छन, ‘डरले मुटु झस्किरहन्छ आजकल…
काठमाडौँ, साउन ३० । केहिदिन अघि नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री पुजा शर्मा विवादमा तानिएकी थिइन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा बोलेको कुरालाई लिएर ट्रोल नै बनेको थियो। त्यसपछि उनि मिडियामा आएर अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नै आफुले बोलेको केहि कुरा का-ट्नको लागि आग्रह गर्दा पनि नमानेको बताएकी थिइन्।
पुजाको यस्तो अन्तर्वार्ता आएपछि रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत उनलाई नै इंगित गर्दै ‘दाह्रा भएकी महानायिका’ भन्दै टिप्पणी गरेक थिए। रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीले कार्यक्रममार्फत यसो भनेका थिए, ‘‘आफैँ नजान्ने अनि हामीले चाहि लिएको इन्टर्भ्यू का-टिदिनु पर्ने? मिलाई-मिलाई महानायिका बनाइदिनु पर्ने? त्यो पनि दाह्रा निस्किएको अनुहारलाई?’
सुवेदीले पूजाविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा अपशब्द र होच्चाउने शब्द प्रयोग गरेपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अधिकांश कलाकारहरुले सामाजिक संजालमार्फत प्रकाश सुवेदीको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउदै आइरहेका छन्। त्यस्तै हास्यकलाकार दिपक राज गिरीले पनि एक लामो स्टाटस लेख्दै यस कुराको बिरोध गरेका छन्। उनि लेख्छन् , ‘आज म लेख्दैछू …”
“हिजो र आज “ हरेक दिन कोरोना virus को डर फैलिरहे संगै एक चलचित्रकर्मी को हिसाबले आज कुन सहकर्मी viral हुने हो भन्ने डरले मुटु झस्किरहन्छ आजकल !!! एकातिर virus को डर अर्को तिर viral को डर !
हिजोको दिनमा कुनै च्यानलमा interview दिएर आउदा मनै गदगद हुनथ्यो, टोल, छिमेकि ससूराली सबैतिर आफै हल्ला गरिन्थ्यो, उत्साहित हुदै टिभी अगाडि बसिन्थ्यो interview हेरिन्थ्यो। तर आजकल समय फेरियो, हामि फेरियौ, सबै फेरियो। आजकल interview को लागि फोन आउदा पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट फोन आको जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसैले सकेसम्म फोनै उठाइन्न र उठाइहाले पनि “ बिजि छू पछि गरौला नि है ?” भनेर टारिन्छ।
सबैलाइ त टार्न सकिन्न अनि interview दिन त जानै पर्यो। अब जानै परेपछि सबै भन्दा पहिला सामान्य ज्ञान पल्टाएर राष्ट्रीय गानका रचयिता को हुन्, नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो ? ७५ जिल्ला पछि थपिएका २ जिल्ला कुन हो? ७ प्रदेश प्रमुख र संचारमंत्री को हो? भनेर पढ्न थालिन्छ।
Interview दिमागमा राखेरै सुतिन्छ। “ आफ्नै राष्टिय गान को रचनाकार था नपाउने, यस्ता पनि सेलिब्रिटी “ भन्ने आबाज रातभर कानमा गुन्जिरहन्छ, राम्रो संग निन्द्रा पनि पर्दैन। भोलि पल्ट स्टूडियो गइन्छ , नमस्कार आदान प्रदान हुन्छ। सबैभन्दा पहिला ऑखा camera तिर जान्छ। आफूलाइ त्यो camera होइन ,बन्दूक जस्तो लाग्न थाल्छ। मानौ रिपोर्टिंग गर्नेको हात पनि माइकमा होइन ट्रिगरमा छ।
सशंकित र पसिना पसिना हूदै सकिन्छ interview एक प्रकारको युद्द जिते झै लाग्छ।
interview प्रसारण हुने दिन बिहान देखि नै जिउ गर्हौ हुन्छ। पहिला पहिला एकपल्ट हेर्नै interview ,अहिले कसैलाइ नभनि सुटुक्क कोठामा गएर दोहोर्याइ, तेहेर्याइ हेरिन्छ। Tiktok चेक गरिरहन मन लाग्छ ,केहि viral पो भैसक्यो कि त्यो दिन काममा ध्यानै जान्न, खालि ध्यान फोनमा मात्रै ! चैबिस घन्टा ऑखा interview का कमेन्टहरूमा,
ससुराको फोन आउदा पनि झसंग झस्किन्छ। “ के हो ज्वाइ साहेब के तोरिलाउरे interview दिएको त्य्सतो ? यस्तै गालि गर्लान कि भन्ने डरले मुटु धडकिरहन्छ। यो माथिको स्थिति एक ब्यग्य मात्रै नभइ भोलिको बास्तबिकता हो जस्तो लाग्न थालेको छ। किन यस्तो ? के कारणले यस्तो ?केहि कुरा त पहिला पनि लेखेकै हू।
जब देखि viral गर्ने गराउने, viral का चक्कर मा लाग्ने, राम्रो interview नहेरिने, बिग्रिएको भत्किएको, चिप्लिएको समाचार र यसका headlines बिक्री हुन थाल्यो। यसबाट एकप्रकारको intellectual cri-me बढ्न थाल्यो। जे बिक्छ त्यहि बेचौ भन्ने मानसिकता हाबि हुदै गयो, यसकै परिणति हो पछिल्ला धेरै घटनाक्रमहरू, यदि यहि क्रम चलिरहने हो भने यसबाट सबैभन्दा घाटा कलाकार र त्यो भन्दा पनि घाटा genuine पत्रकारीता गर्दै आएका निर्दोष साथिहरू लाइ हुन जान्छ।
कलाकारले क्यामारा र पत्रकार देख्दा तर्सिने, पत्रकारले कलाकार को राम्रो “interview“ को लागि पनि दुख पाउनु पर्ने, हामि यस्तै बाटो हिडिरहेका छौ। पहिला पहिला पत्रकार साथिहरूले कलाकारले बोलेको नराम्रो लाग्ने कुरा आफैले का-टिदिन्थे, तर आजकल “ कलाकार चिप्लेको कुरा हाम्ले किन मिलाइ मिलाइ का-टिदिनु पर्ने?” भन्ने दिन आयो। एकै क्षेत्रको भएको नाताले हामि मध्य जो नॉगिए पनि औला चाहि हामि दूबै तिर उठछ है ? यसमा शंका नगरौ!
अहिलेको स्थितिमा viral र virus दूबै बाट बचौ!!!’